Nhasi uno mucherechedzo wemakore mazana maviri ekuberekwa kwaThoreau | Zvazvino Zvinyorwa
Nhasi uno mucherechedzo wemakore mazana maviri ekuberekwa kwaThoreau
Pazuva rino, makore mazana maviri apfuura, mudetembi uye muzivi Henry David akazvarwa. #Thoreau, baba vezvemamiriro ekunze uye echinyakare. Rimwe remabasa ake epamusoro aive akanzi "Kusateerera kwevanhu". Iwo waive musangano wakanyorwa nemunyori iye, uye pazasi isu tichanyatsotsanangura zvimwe zvezvinonyanya kutaurwa mazwi, izwi neshoko, nekuti hapana marara chero. Asi kutanga, tichaongorora imwe yakakosha ruzivo nezve hupenyu hwake nebasa.
Thoreau akaberekwa muna Chikunguru 12, 1817 muConcord uye akashaya musi waMay 6, 1862 aine makore makumi mana nemana. Anochinjika kwaanenge aripo, aibvira pamugadziri wepenzura kuenda kune zvakasikwa kusvika kumudzidzisi uye kuongorora. Thoreau anoonekwa nhasi sababa vekutanga vezvinyorwa zveAmerica. Akazvarwa mumhuri inozvininipisa, aive munhu asina kugadzikana uye aigara achishuvira kuongorora uye kutsvaga minda mitsva yekudzidzisa iyo inogona kuunza chimwe chinhu chitsva kuzivo yake. Akadzidza paHarvard College, koreji iyo makore akazotevera yaizove yakakurumbira yunivhesiti yeAmerica sezvazviri nhasi.
Pakati pemabasa ake akatanhamara ndeaya:
"Kufamba kuenda kuWachusett" (1842).
«Paradhiso (ichave) Yakadzorerwa» (1843).
"Herald Yerusununguko" (1844).
"Thomas Carlyle neBasa rake" (1847)
"Vhiki pane iyo Concord neMerrimac Nzizi" (1849)
"Kusateerera kwevanhu" (1849)
«Kuenda kuCanada» (1853)
"Uranda muMassachusetts" (1854)
"Mazuva Ekupedzisira aJohn Brown" (1860)
"Autumnal Tints" (1862)
"Maapuro Emusango: Nhoroondo yeApple Muti" (1862)
"Hupenyu husina Mitemo" (1863)
"Husiku uye Mwenje weMwedzi" (1863)
"Chiedza cheHighland" (1864)
"Kutanga Chitubu muMassachusetts" (1881)
"Nguva yechando" (1889)
Rakawanda rebasa rake raikurudzirwa nemafambiro anotevera, pfungwa, uye vanhu:
Kufambiswa kwekodzero dzevanhu.
YeBritish yevashandi kufamba.
Zvisinei, nhasi, mazwi emunyori aya anotaurwa nevaMarx pamwe nevevanhu vanochengetedza, nevasununguka uye vezvematongerwo enyika,… Tevere, tichaona kuti ndeapi mazwi akange ari ekuti "Kuteerera kweVanhu".
Kana iwe uchida kuverenga uku kusateerera kwevanhu unogona kuzviita mune zvinotevera link. Iyo ndeimwe yeanonyanya kuverenga kuverenga iwe kwaungaite nhasi.
Kana, kune rumwe rutivi, iwe uchida kunakidzwa nechimwe chezviitiko zvake zvakatanhamara, heano mamwe acho:
Kunyangwe iko kutanga kungaratidzika kuve kudiki.
Ini hapana chandinoziva chinonakidza kupfuura kugona kwevanhu kwekukwiridzira hupenyu hwavo kuburikidza nekuedza nesimba. Icho chinhu chaicho kukwanisa kupenda mumwe mufananidzo, kuveza chifananidzo kana, pakupedzisira, kugadzira zvimwe zvinhu zvakanaka; zvisinei, zvinonyanya kubwinya kuveza kana kupenda mhepo, iyo nzira yatinozvitarisa pachedu, inova inoenderana netsika. Kufuridzira kunaka kwezuva, ndiko kukwirira kwehunyanzvi. Wese murume ane basa rekuita kuti hupenyu hwake hukodzere, kudzika kune hwaro, hwekufungisisa kweake epamusoro uye akakosha nguva.
Zvakawanda sei zvinobudirira uye zvinonzwisisika zvaanogona kurwisa kusaruramisira uyo akazvitambura, kunyangwe padiki padiki, munyama yake.
Rarama wakasununguka uye usabvumirane pane zvakaipa. Pane musiyano mudiki pakati pekuvharirwa papurazi kana mutirongo.
Iyo Harivansa inoti: "Imba isina shiri yakafanana nenyama isina kugadzirwa." Imba yangu yanga isina kudaro nekuti, kamwe kamwe, ndanga ndave muvakidzani weshiri, kwete nekuti ndakasunga imwe, asi nekuti ndakanga ndakavharirwa pedyo navo.
Zvinonditorera zvishoma mupfungwa dzese kuti ndive nechirango chekusateerera Nyika, pane zvaizonditorera kuti nditeerere. Ini ndaizonzwa sekunge ndakanga ndisingakoshese muchiitiko ichi.
Zvakanakisa zvinoitwa nemurume kutsika yake kana akapfuma kuita izvo zvirongwa zvaakarota achiri murombo.
Tsindi yaunouraya sedambe inonyatsofa.
Kune mitemo isina kururama: isu tinofanirwa kugutsikana nekuiteerera, toshanda kuvandudza, uye kuiteerera kusvikira tabudirira, kana kuti tinofanira kuityora kubva pakutanga?
Chero murume akarurama kupfuura vavakidzani vake anotoita ruzhinji rweumwe.
Pasi pehurumende inosunga zvisirizvo chero munhu, imba yemurume akatendeka ijeri.
Hurumende yakanakisa ndeiya isingatongi zvachose, uye kana varume vakagadzirira, iyi ndiyo ichave iyo mhando yehurumende ichave nemunhu wese..
Hurumende pachayo, inova chete nzira dzakasarudzwa nevanhu kuti vaite kuda kwavo, zvakaenzana zvinoitirwa kushungurudzwa nehuwori vanhu vasati vauya kuzoshanda nazvo..
Mugari anofanirwa kuramba hana yake, kunyangwe kwekanguva kana padiki padiki achitsigira paramende? Saka sei munhu aine hana? Ini ndinofunga kuti isu tinofanirwa kutanga tave varume uyezve masubject. Hazvina kudiwa kukudziridza kuremekedza kwakanyanya mutemo sekureva izvo zvakanaka. Izvo zvataurwa chaizvo chaizvo kuti mubatanidzwa hauna hana, asi mubatanidzwa wevarume vanoziva mubatanidzwa nehana. Mutemo hauna kumboita kuti murume ave neota imwe akarurama; Uyezve, nekuda kweruremekedzo rwake kwaari, kunyangwe vane rupo vanoshandurwa kuva vamiriri vekusaruramisira zuva nezuva. Mhedzisiro uye yakasikwa mhedzisiro yekuremekedza zvisina kukodzera mutemo ndeyekuti iwe unogona kuona mutsara wemasoja: colonel, kaputeni, koporo, masoja, dynamiteers uye vese, vachifora nenzira inoyemurika mhiri kwemakomo nemipata kuenda kuhondo, vachipesana nekuda kwavo, hongu, kupesana nepfungwa yakewo nehana, izvo zvinoita kuti iyi, zvechokwadi, kufamba kunonetsa kwekurova moyo. "Hapana mubvunzo kuti vari kuita basa rinosemesa nerunyararo."
Uye heino vhidhiyo yeavo vanosarudza audiobook nezve uyu musangano wakanaka.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Nhasi uno mucherechedzo wemakore mazana maviri ekuberekwa kwaThoreau
Mabhuku manomwe pamusoro paJulius Caesar pazuva rekuzvarwa kwake